Kora bara 2014 Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii Damee Bayern Milkiin geggeffame
Kora TBOB bara 2014, Ebbaa manguddoota Oromoo fi Yaadannoo Oromoota sirna Haabashoota fi Motummaa TPLF wayyaaneen lubbu isaani darbefi, qabenyi isaani saamame fi mana hidhaa wayyaanee kessati guuramani hidhaan dararamaa jiran daqiiqa tokkoof yaadachuun jalqabame.
Itti aansudhaan Misensoota Harawaatu simannaan godhameef , boda Gabaasa raawwii hojii dhihaate irratti mariin geggeffame. Misensoota TBOJ kan ta'aan Addee Sena Gary Ayyaanaa, Obbo Nuredin Shaalu Ilu, Obbo Alamayehu Negasa fi Obbo Mosisa Asefa Jaleta Walaloo fi barumsa dhihessanin onnee hirmaattoota dammaqsaa fi kakaasa olaniiru.
Akkasumas Qophilee bara 2014 kessa kara TBOJn rawatamani fi kaarorfaman ilaalchise marii ho’aa hirmaanna dammaqinan godhame booda, sagalee tokkon ibsa ejjannoo kana gadii jiran baasudhaan walgahiichi xumurame jira.
1. Qabsoo Bilisummaa Oromoo yo hadhaatees yo jabaatees abdii utu hinkutatin wareegama barbaachiisaa ta’ee hunda kaffaluf qophi ta’ukenya ni mirkanessina
2. Tokkummaa Qabsaa’oota Bilisummaa Oromiyaaf waamicha kabajaa dabrsina
3. Motummaan TPLF yakka Barattoota Oromoo irrati raawwachaa jiru hatattaman akka dhaabu ni akeekachifna
4. Ajaja Motummaa TPLFn warri Oromoo ajjechaa fi hidha akkasumas saama jiran akka Seeran gaafatamn ni gaafanna
5. Saamicha Lafa Oromoo hataattaman hadhaabatu, lafti qonnaan bula Oromoo haarka saamame hunda deebi’ee akka kennamuf ni gaafanna
6. Motumaalen adunyaa , gargaarsa Motummaa TPLFif gocha jiran hatattaman akka iiti yaadan ni gaafanna.
7. Nuyi Oromo dha! Oromiyaan bilsoomsuuf qabsoo geggeffamu kam iyyu ni degarra.
Misensoota TBOJ-Damee Bayern
Kora TBOM bara 2013 Oromoota Motummaa Abbaa Irre Wayyaaneen Ajjeffaman sirna dungoo qabsiisun Yaadate
Korri TBOM guyyaa 05.10.2013 magaalaa Münchenitti sa’a 14:00-19:00 tti sirna ho’aa dhaan geggeefame. Korra kana irratti miseensonni TBOM baayyinan qooda fudhataniiru. Akkasumas bakka bu‘a koree hojii geggeessituu Tokkummaa Barattoota Oromoo damee Hessen (TBOH) kan ta’an Obbo Gammachuu fi TBOJ baaka bu’udhaan Obbo Fallaqaa argamaniiru.
KHG TBOM hirmaatota kora kanaa kabajaan erga simatee booda, Kessummoota kabajaa Qabsaa’oota Hidhanno ABO kann turan fi Miseensoota TBOM kan ta‘an obbo Umar Abdulsalam Tilmo fi obbo Haruun Kalil Bati Gara waltajiitti affeere. Ittii aansuunis bakka bu’oota amantaa Kristiyaanaa, Isilaamaa fi Waaqeffataa kan ta’an Jaal Etafa Legese, J/ Fuad Aman Adam fi J/Watol Wado kora guyyaa kanaa akka Aadaa Oromootti eebban bananiiru.
Itti ansuudhaan Wareegamtoota Qabsoo Bilisumma Oromoo akka Obbo Tasfaahun camadaa fa aaksumas kanaan duras ta’e yeroo ammaa kana keessas dhiibbaa, haccuuccaa fi miidhaa abba irree mootumaa woyaanee jalatti kanneen dararamaa jirranii fi kanneen lubbuun isaaniis darbe maraf yaadannoon sirna dungoo qabsiisuudhaan Jaal Haarun Kalil fi Jaal Umar Abdulsalaam geggessani jiru.
Korri kunis qabxilee dhihaatan irratti marii ball’aa godhatee dhimmoota garaa garaa irratti murtii barbaachisoo kenneera.
Dura ta’aa KHG TBOM kan ta’an obbo Mekonen Gurmesa seenaa TBOM gabaabatti waggootan darban kurnan keessatti maal irra akka ture, rakkoo hanga iddootii isa balleessutti isa mudachaa ture, attamitti dandamatees haala amma irra jiru irra akka ga’e erga ibsanii booda gabaasa hojii dhi’eessan.
Akkasumas bara 2013 keessa hojiin raawatamuutti dabalee, sagantaa aadaa Oromoo beeksisuu seminaaraa wajjin wal qabsiisee qopheessuu fi hiriira nagaa guddaa mootummaa woyaanee irratti ba’uus raawateera. Akkasumas mseensota keessaa namoota akka dandeettii isaaniitti hojii garaa garaatti bobaasudhaan hojii guddaa rawwachu danda‘ameera. Rakkini hawaasumma Oromoo kessa gaafa umamees TBOM akka Dame TBOJ tokkotti damee Hessan Wojjin ta’u dhaan, namoota gadda qaban jajjabeessuufis garagaarsa maallaqaas argachuu kan malaniif hanga danda’ame gargaarutti dirqama isa bahe jira.
Ittigaaftama fi to’ata Dinaagde kann ta’an J/Gamtaa Takkalaa Riqituu gabaasa dinagde woligalaa fi yaada foyyessaa dhihessani TBOMin Qabsoo Bilisummaa Oromoo kessa ballinaan dirqama isa bahuuf dinagdeenis of cimsu akka irra jiru hubachiisaniiru.
Mata duree „Yaada TBOJ cimsu danda’u isa jedhu irratti Miseensa TBOM kann ta’an Jaal Mezegbu Demeke Boru bareffama gabaaba dhihessaniin, yeroo ammatti yeroo kam iyyi caala TBOM akka damee TBOJtti Sagalee ummata Oromoo ta‘udhaan qabsaa’uuf ittigaafatamumma guddaa qaba, kanaafi wal dhabbiinsa Jaarmoole siyaasa Oromoo kessa utu hinmakamin uf cimsuun dirqama yeroo fi senaa dha jechun hasaa isaani xumuraniiru.
Ittiansudhaan gaaffii fi yaada miseensoota irraa dhihaate irratti marii ballinaan geggeffame booda, Koree Hojii geggessitu dame TBOM tu filatame.
Dhuma irratti koreen damee hojii garaa garaatti filataman kun hojichaa yeroo itti gaafatama isaanii kana keessatti sirriitti seeraan hojechuuf kakuu galanii KHG TBOM isa waggaa darbeef hojechaa ture harkaa fuudhanii wal-ga’iin kora TBOM inni bara 2013 haala gammachiisaadhaan xumurame.